Tag: svg | Martech Zone
Maxay Xawaaraha Boggu U Yahay Mid Xasaasi ah? Sida Loo Tijaabiyo Oo Loo Hormariyo Kuwaaga
Wednesday, May 15, 2019 Wednesday, May 15, 2019 Tyson Degdeg ah
Waqtiga Akhrinta: 6 daqiiqo Goobaha badankood waxay lumiyaan qiyaastii kalabar booqdayaashooda sababtoo ah xawaaraha bogga oo gaabis ah. Xaqiiqdii, celceliska heerka bounce-ka boggaga desktop-ka waa 42%, celceliska soo-kabashada bogga mobilka wareega waa 58%, celceliska celceliska bogga soo degitaanka boost-gujintu wuxuu u dhexeeyaa 60 illaa 90%. Lambarjarin nambarada si kasta ha noqotee, gaar ahaan tixgelinta isticmaalka mobilada ayaa sii kordheysa wayna sii adkaanaysaa maalinba maalinta ka dambeysa soo jiidashada iyo ilaalinta dareenka macaamiisha. Sida laga soo xigtay Google, ka
Tifatiraha Vecteezy: Tifatiraha SVG ee Bilaashka ah ee khadka tooska ah
Jimco, Juun 23, 2017 Jimco, Juun 23, 2017 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Daalacashada casriga ahi waxay qabanayaan shaqo aad u fiican iyagoo taageeraya qaabka sawirada dulinka ee la qaadi karo (SVG). Haddii aad la yaaban tahay waxa gobbledygook macnaheedu yahay, waa kuwan sharaxaad dhakhso leh. Aynu nidhaahno waxaad haysataa gabal yar oo garaaf ah oo waxaad rabtaa inaad hoos u dhigto baarka bogga, adigoo buuxinaya 10 jibbaarane. Waxaad ku buuxineysaa laba jibbaarane iskeed usameeye afargeesle ah x iyo y iskuduwaha si aad uxusuusato kuwaad buuxisay.
Tilmaamaha Naqshadeynta Naqshadeynta Jaantuska
Axad, Nofeembar, 10, 2013 Isniin, November 11, 2013 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Haddii aad tahay nooca wax soo iibinta ee ku hadli kara jargon iyo istiraatiijiyad, waxaad u maleyneysaa inaad maalmahan qabanaysay shaqo aad u badan. Waxaan lahadleynaa IT folks, horumariyeyaasha iyo nashqadeeyayaasha… badanaana waa inaan tarjunaa inta udhaxeysa! Loogu talagalay waa hay'ad dijitaal ah oo abaalmarin ku guuleysatay oo soo saartay muuqaalkan quruxda badan si ay uga caawiso dadka inay fahmaan moodooyinka midabka iyo qaababka feylka. Iyada oo qalab casri ah oo leh cufnaan badan oo muuqaal ah iyo qaabab fayl ah iyo riixid bixinaysa xawaare dheellitiran iyo